Anoshanda Ekushambadza Kufanotaura kune Kuronga kwe2015 | Martech Zone
Kana pamwe kunyange izvozvi! Iri izita rakasimba renzvimbo gumi dzekutarisa idzo vatengesi vanofanirwa kufunga nezvadzo.
Iwe unofanirwa kuziva kwekugovana yakawanda yeako bhajeti rekushambadzira, zvichibva pamatekiniki ako vatengi uye tarisiro vari kuita nayo kakawanda. Ndosaka Wheelhouse Advisors kuyedza kuita kuti iyi infographic ive yakazara sezvinobvira, kugadzirisa nyaya kubva kuemail Kushambadzira, kutungamira kutendeuka, kune epuratifomu mapuratifomu.
10 Kufembera Kufanotaura kwe2015
Kuenderera mberi kukurumbira mu content marketing.
Kushandiswa kwe data rekushambadzira.
Wedzera mukati ruzha rwekutengesa.
Kuderera mukati guest posting.
Kugamuchirwa kwe Video.
Wedzera mukati kushambadzira software kuwanikwa.
Micro kunongedza uye hyper-chidimbu.
Kuwedzera kwekutarisa pa famba.
Kuwedzera online shambadza shandisa.
Zvese izvi, chokwadika, zvinonongedza kudiwa kwekushanda zvakanyanya pamwe neako kushambadzira kuyedza - yakafara yekumaka mabhenji mari inofanirwa kuchinjirwa neanoshanda, akavandudzwa, akanangidzirwa-zvakanaka mari. Zvishandiso uye mapuratifomu ekukubatsira iwe mukutsvagisa, kuendesa, kugadzirisa uye kuyera mhinduro dzako zvinofanirwa kuve chikamu chemakozhinji ekushambadzira aunoshandisa.
Tags: shambadza shandisaContent Marketingguest postinghyper-chidimbuinfographicdata rekushambadziraruzha rwekutengesakushambadzira software kuwanikwamicro-kunongedzamobile marketingonline kushambadzira shandisavhidhiyo kushambadzirawheelhouse mazano